Daawo muuqaalka: maamulka Somaliland oo sheegay in wadahal toos ah la gali doonaan DF ee Soomaaliya |
Daawo muuqaalka: maamulka Somaliland oo sheegay in wadahal toos ah la gali doonaan DF ee Soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa shaaciyey in toddobaadka soo socda ay wada hadal la gali doonaan dawladda Somaaliya isla markaana shirku uu ka dhici doona dalka Turkiga oo labada dhinacba casumaad u fidisay.
Wasiirka arrimaha dibada maamulka Somaliland CabduLaahi Maxamed Cumar ayaa hadalkan caawa kaga dhawaaqay madaxtooyada Hargeysa.
Wasiirka ayaa sheegay in shirku laba toddobaad ka dib uu ka furmi doono dalka Turkiga,faahfaahin kama uusan bixin Ajandayaasha shirka diirada lagu saari doono.
Dawladda Somaaliya oo aan weli ka hadlin wadahadadlada u bilaamaya iyaga iyo maamulka Somaliland ayaa dhawr jeer ju celisay inay diyaar u yihiin sii socoshada wada hadaladii Somaaliya iyo mamulka Somaliland u bilaamay sannadkii hore ee 2012.
Wadahadal kaani u sheegay wasiirka Somaliland ayaa ka dambeeyay kadib markii Dowlada Turkiga ay si toos ah ugu sheegtay madaxweyne Siilaanyo in aysan dowlada Turkiga aqoonsaneen wax la yiraahdo Somaliland.
Halkaan hoose ka daawo muuqaalka Wasiirka arrimaha dibada maamulka Somaliland CabduLaahi Maxamed Cumar.